Akinwumi Adesina:« TSY TOKONY HAHANTRA NY GASY » -
AccueilRaharaham-pirenenaAkinwumi Adesina:« TSY TOKONY HAHANTRA NY GASY »
05/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny dimy isan-jaton’ny velaran-tany 35 tapitrisa hekitara eto Madagasikara dia mbola azo ambolena sy trandrahina hamokatra avokoa. Raha io no voajary dia ho sompitra aty amin’ny Ranomasimbe Indiana isika. Manana toho-drano mahavokatra herinaratra mihoatra ny 7 800 koa izy. Raha tsy hiteny afa-tsy ireo teboka roa lehibe ireo, izay ananan’i Madagasikara isika , dia hita fa tena tsy “misy antony tokony hampahantra an’izany Madagasikara izany”. Mbola tsy resahina ny fananany harena an-kibon’ny tany, ny fananany ranomasina azo trandrahina sns…Ireo teboka rehetra io moa no nasongadin’i Dr Akinwumi A. Adesina filohan’ny Banque Africaine de Développement, teo ampanombohana ny lahateniny nandritra ilay “Conférence des Bailleurs et Investisseurs” (Cbi) tany Paris ny faran’ny herinandro teo.
“ Raha ireo tombondahiny maro ananan’i Madagasikara dia tsy tokony hahantra ny Malagasy. Tonga ity ny fotoana hanampiantsika azy”, hoy ity filohan’ny Bad ity. “ Raha vao nihaona taminao aho andriamatoa filoha Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny Septambra 2015 iny, dia ny zavatra tsapako voalohany taminao dia ny fanananao finiavana hitondra fampandrosoana ho an’i Madagasikara. Vao tsinjoko koa ny fanananao finiavana hampandroso dia niteny an’ireo mpiara-miombon’antoka namako aho hoe tsy maintsy hanampy an’i Madagasikara isika. Miombon-kevitra aminao mihitsy aho andrimatoa filoha Hery Rajaonarimampianina fa tsy misy antony tokony hampahantra ny gasy. Hamafisiko eto fa ao an-damosinao avokoa izahay ary hanampy anao”, hoy hatrany Akinwumi A. Adesina.
Nambaran’ity filohan’ny Bad ity teo imason’ireo mpamatsy vola vahiny, vory marobe tamin’io Cbi tao Paris io fa “ na sambany aza aho no nitsidika an’i Madagasikara dia hitako ny fahavononan’ireo mpitondra tarihin’i Sem Mr le president Hery Rajaonarimampianina hitondra ny mahasoa ho an’ny vahoakany. Firenena vao nivoaka ny krizy i Madagasikara ka mila ny firaisankinantsika mpamatsy vola vahiny mba hanana fiaingana vaovao indray”. Ny Bad no nanambara voalohany fa hanome 1 miliara dolara hanohanany ny Pnd (Drafitra nasionaly ho an’ny fampandrosoana). Izy no nisantatra ny fanomezana ny famatsiam-bola ary nanaraka avy eo ireo mpamatsy vola vahiny hafa ka nahazoantsika an’iny 6,4 miliara dolara, andro voalohan’ilay Cbi iny. Ireto avy ireo solontenan’ny mpamatsy vola vahiny hafa nandray fitenenana tamin’izany ankoatra ny filohan’ny Bad : Mark Lundell solontena maharitry ny Banky Iraisampirenena aty Afrika (Country Director pour Madagascar, Seychelles , Mozambique de la Banque Mondial), Abdoulaye Mar Dieye tale rezionalin’ny Pnud aty Afrika, Michaëlle Jean sekretera jeneralin’ny Oif.
Nohamafisin’ny filoha io tenin’ny president Bad io. Fanamby tokana ihany ny ahy, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny kabary famaranana ny Cbi ny alin’ny zoma teo : “ Tokana ihany ny ahy ny fanamby hapetrako ho an’ny tanindrazako dia ny fampakarana ny fari-piainan’ireo mpiray tanindrazana amiko rehetra sy ny ady amin’ny fahantrana. Natao nifototra amin’ny fanatrarana ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra (ODD) izay niarahantsika rehetra namaritra izany. Madagasikara mandroso sy moderina mantsy no fanamby izay voafaritra anatin’io Pnd ( Plan National de Développement ) koa izany”.
Nahatratra 10,2 miliara dolara no voaangona nandritra an’iny roa andron’ny Conférence des Bailleurs et Investisseurs iny, izay misokajy ho 6,4 miliara dolara avy amin’ny mpamatsy vola vahiny ary ny 3,8 miliara dolara avy amin’ireo mpampiasa vola tsy miankina.
Rocco Rasoanaivo ( Paris ) sy Tojo Ramilianta
Mpitarika miisa 28 no handrafitra ny birao iraisam-paritry ny Hvm Faritra Atsinanana na ny « Bureau Inter-Régional », ka ny ao Toamasina I dia misy mpikambana misy 5 ;Toamasina II misy 5; Brickaville misy 5; ...Tohiny